यिनै हुन् २२ वर्षका युवक सागर जसको बोल्दा बोल्दै आँखा अगाडी मृ’त्यु भयो ! – Online Khabar 24
यिनै हुन् २२ वर्षका युवक सागर जसको बोल्दा बोल्दै आँखा अगाडी मृ’त्यु भयो !
बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत थप दुई सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको छ । थप दुई जनाको उपचारकै क्रममा मृ’ त्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा एक २२ वर्षका युवक सागर कार्की र ७२ वर्षीय बृद्ध रहेको जिल्ला को’भिड १९ संक’ट ब्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ । बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर– ५ का २२ वर्षीय सागरको सं’क्रमणबाट ज्या’न गएको थियो ।
यही असोज ४ गते नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनलाई सं’क्रमण पु’ष्टी भएको फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिए । त्यसपछि उनी भोलीपल्ट भेरी अस्प’तालमा आएर भर्ना भएका थिए ।
तर, सं’क्रमण पुष्टी भएको पाँच दिनमै २२ वर्षका सागरको मृ’त्यु भएको उनले बताए । अस्पतालका अनुसार युवकको आईतबार बिहान १ बजेर ३० मिनेटमा मृ’त्यु भएको थियो । सागर बोल्दा–बोल्दै मृ’त्यु भएको हो । उनी मृ’त्युको केहीबार अघिसम्म आफ्ना कुरु’वासँग बोलिरहेका थिए । यस्तै बर्दिया, बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर– ४ का ७२ वर्षीय पुरुषको पनि को’रोनाले ज्या’न गएको छ ।
भेरी अस्प’तालमा गत भदौं ३० गते सं’क्रमण पुष्टी भएपछि उनी सोही दिन अस्प’तालमा भर्ना भएका थिए । स्वा’स्थ्यमा कुनै सुधार नआएपछि शनिबार राती ९ बजेर ३० मिनेटमा मृ’त्यु भएको अस्प’ताललाई उद्धृत गर्दै फोकल पर्सन ओलीले बताए । यो खबर ताजा खबर बाट साभार गरियको हो ।
Prevक्याप्टेन एजी शेर्पा : जस्ले ७३ यात्रु सहित आफ्ना सहकर्मीलाई नयाँ जीवन दिए !
next७७ जनाको ज्यान बचाएर जहाजबाट बाहिर आउँदा क्याप्टेनको यसरि भयो स्वागत !